ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလိင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်သောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားပြင်းထန်သောအပြုအမူပုံစံများအတွက်အန္တရာယ်အမှတ်အသားအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း (၂၀၀၉) - Your Brain On Porn
J ကို Am Psychiatric သူနာပြုများ Assoc ။ 2009 Jan;14(6):442-53။ Doi: 10.1177 / 1078390308327137 ။
Alexis EM, Burgess AW, Prentky RA.
သူနာပြုဝီလျံအက်ဖ် Connell ကျောင်း, ဘော်စတွန်ကောလိပ်မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်။
သူတို့ရန်လိုအပြုအမူတွေအမျိုးမျိုးများအတွက် High-အန္တရာယ်အုပ်စုတစ်စုကြောင့်လိင်တုံ့ပြန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက် (SRCAs), တစ်ခါတစ်ရံအဖြစ်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူရည်ညွှန်းပိုအားနည်းချက်များနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ T ကဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူမြားကိုမဟုတျဘဲလုပျသူမြား၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ပြရန်နှင့် SRCAs ကြားတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရန်လိုအပြုအမူတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့များဆနျးစစျဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူ။
ဤသည်အလယ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ 160 SRCAs လေ့လာဖို့တစ်ဖော်ပြရန်, ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ chi-စတုရန်းနှင့်တစ်ဦးချင်းအလေးသာအချိုးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ရန်လိုအပြုအမူတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားအသင်းအဖွဲ့များဆနျးစစျဖို့အလုပ်ခန့်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ SRCAs သူတို့ရဲ့ nonusing ဆောင်များတွင်ထက်ပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေကိုဖော်ပြရန်ပိုပြီးခဲ့ကြသည်။ ဤအကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ရင်ဆိုင်သူနာပြုများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။
အလားတူလေ့လာမှုမှာယခင်က Alexis et al ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ် (2009) လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပုံစံများကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်း၏စားသုံးသူခဲ့ကြသည်သူများသည်ထိုကဲ့သို့ခိုးယူ, ကျောင်းပြေး, အခြားသူများကြိုးကိုင်, မီးရှို့မှုအဖြစ်ပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေ၏ပုံစံများကိုဖော်ပြရန်ပိုပြီး ရှိ. , လိင်ဆက်ဆံခြင်းရသည်။
အလားတူလေ့လာမှု Alexis et al အားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။ 2009 ၌တည်၏။ ဤရွေ့ကားစာရေးဆရာများ 160 လိင်တုံ့ပြန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက် (SRCA) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအကြားကသူတို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့များနှင့်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ (စ။ 450) "အ SRCA လူဦးရေက high-အန္တရာယ်တစ်ဦးချင်းစီ, ကျူးကျော်များအတွက်ဓာတ်နှင့်အတူအထူးလူငယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပါဝင်သည်" ။ တစ်ဦးဖော်ပြရန်, ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်း, ဒီလေ့လာမှု SRCAs လိင်ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေ့ရှိခဲ့
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏ "အတင်းအကျပ်အင်္ဂါဇာတ်ထိုးဖောက်မှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နဲ့ထိုကဲ့သို့သောပါးစပ်သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိုးဖောက်မှုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူအတင်းအကျပ်, လိင်ပြင်းထန်တဲ့မှတ်ချက်တွေ (ညစ်ညမ်းမှု) ကိုဖော်ပြရန်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့" (စ။ 450) မသောသူထက် ။